SARCOIDOSIS र FATIGUE
थकान, चरम थकान, सरकोडोसिस रोगीहरूको लागि सबै भन्दा सामान्य उजुरीहरूमध्ये एक हो। यो जीवनको गुणस्तरमा नकारात्मक असर छ।
थकान कस्तो छ?
थकान कुनै सामान्य परिभाषा छैन तर शारीरिक वा मानसिक ऊर्जा वा प्रेरणाको कमी समावेश गर्दछ। मानिसहरू यो स्पष्ट कारणको साथ थकान को भारी भावनाको रूपमा वर्णन गर्छन्। थकान सही रूपमा मापन वा चिकित्सा उपकरणसँग देखिन सकिँदैन।
Sarcoidosis को समयमा थकान
Sarcoidosis रोग को अधिकांश को निदान को समयमा थकान को लक्षण प्रदर्शित गर्दछ। सम्भवतः यो बीमारी को सूजन प्रक्रिया को कारण हो। संक्रमण को परिणाम को रूप मा प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा केहि प्रोटीन (साइटोकिन) उत्पादन गरिन्छ। यी प्रोटीनले थकानको लक्षणहरूको कारण हुन सक्छ।
थकान र सरकोडोसिसको बारेमा थप पढ्नुहोस् ...
एमएस सोसायटीमा उत्कृष्ट जानकारी छ थकान व्यवस्थापन। यो जानकारी को अधिकांश सामान्य मा थकान को बारे मा छ - एमएस को लागि विशिष्ट अनुभाग को अनदेखी गर्नुहोस।
पुल्मन फाइब्रोसिसका लागि एक्शनको बारेमा धेरै जानकारी छ सास फेर्नको लागि, सरकोडोसिस को एक सामान्य लक्षण जुन थकान संग सम्बद्ध हुन सक्छ।
थकानको बारे थप जानकारी Medicinenet। यो जानकारी sarcoidosis को लागि विशिष्ट छैन।
थकानले मानिसहरूलाई विभिन्न तरिकामा असर गर्छ, र यसले हप्तादेखि हप्ता, दिन दिन, वा घण्टा देखि घण्टा सम्म परिवर्तन गर्न सक्छ। थकानको लक्षण समावेश हुन सक्छ:
धेरै सानो गतिविधि पछि चरम थकान।
तपाईं सुतिरहेको बेलाको जस्तो थकाइको भावना महसुस गर्दै।
सन्तुलन, दृष्टि वा एकाग्रता संग कठिनाइहरू।
थकान परीक्षण गर्न सकिँदैन र त्यहाँ सधैँ पेशेवरलाई परामर्श गर्न सकिदैन। यसले सबैलाई जटिल बनाउन सक्छ मित्रहरूलाई, परिवार, सहकर्मीहरू र स्वास्थ्य र सामाजिक हेरविचार प्रविधिहरूमा तपाईंको थकान। उनीहरूलाई बेइमानीले तपाईंलाई सोध्न सक्छ कि 'केहि थप प्रयास' वा 'ढिलो हुन रोक्न'। यो समस्या अझ खराब बनाउन सक्छ कि बिरामीहरू अझै पनि सक्रिय र स्वस्थ हुन सक्दछन् केहि समयको। यसले काम र सामाजिक परिस्थितिमा तनाव बढाउन सक्छ।
प्रायः यो मामला हो कि सरकोडोसिस देखि छूट मा रोगहरु अझै थके रहयो। जब यो लक्षणहरू6महिना भन्दा लामो समयसम्मको लागि, यो 'पुरानो थकान' भनिन्छ। यो थाहा छैन कि कति सरकोडोसिस रोगीहरूले पुरानो थकानबाट पीडित हुन्छन्।
यद्यपि यो स्पष्ट छ कि सार्कोडोसिससँग सम्बन्धित पुरानो थकान बीउको समयमा सुरु हुन्छ, थकानको सटीक कारण अज्ञात रहन्छ।
Sarcoidosis पछि पुरानो थकान अक्सर यी लक्षणहरूसँग छ:
दुखाइ (गला, सिर, लिम्फ नोड्स, जोडहरू);
एकाग्रता र स्मृति समस्याहरू;
बिरामीको उपचार पछि;
चिन्ता र अवसाद;
असहज पैदल यात्रा
मांसपेशी बल कम भयो;
जस्तै, सरकोडोसिसको पछि पुरानो थकानले जीवनको गुणस्तरलाई कम गर्छ।
थकानको निदान गर्न कुनै विशेष, मेडिकल परीक्षाहरू उपलब्ध छैनन्। तथापि, तपाईंको डाक्टरले थुप्रै थकानमा तपाईंको थकानको जांच गर्न सक्दछ।
थकान आकलन स्केल: तपाईंको चिकित्सकले तपाइँको थकानको प्रयोग गरेर तपाइँका प्रश्नहरू सोधेर सोध्न सक्छ थकान आकलन स्केल (एफएएस)।
सोझो अनुसन्धान: घरमा वा अस्पतालमा तपाईं एक रातको लागि सुत्नुहुन्छ जब सुत्ने उपकरणहरूसँग जोडिएको छ। निद्रा विकारहरू त्यसपछि थकानको कारणको रूपमा छुट्याउन सकिन्छ।
अभिलेख: कुनै प्रकार को pedometer जो शारीरिक गतिविधि पहने छ। यसले कसरी सक्रिय बनाउँछ र कसरी तपाईंको ऊर्जालाई अझ कुशलतापूर्वक फैलाउँछ।
थकानको लागि कुनै उपचार छैन। केवल सिद्ध उपचार संयोजन गर्दैछ संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) एक भौतिक चिकित्सक को मार्गदर्शन संग धीरे - धीरे भौतिक गतिविधि को निर्माण संग। तथापि त्यहाँ थुप्रै जीवन शैली छनौटहरू छन् जसले थकानलाई लडाइदिनेछ:
स्वस्थ जीवन बिताउनुहोस्। एक स्वस्थ, विविध आहार खाओ। धुम्रपान नगर्नु, मर्मतमा अल्कोहल पिउनुहोस् र सुत्नुअघि कफी नदिनुहोस्।
भविष्यलाई हेर्नुहोस् र योजनाहरू बनाउनुहोस्। योजनाहरू साँच्चै मदत गर्दछ। भविष्य तिर हेर्नुको लागि राम्रो छ र फेरि हेर्न नचाहिने हो। प्रियजनहरूलाई कुरा गर्नुहोस् र प्रेरणाको लागि तपाईंको नजिकको सरकोदोससयुद्ध समर्थन समूहको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्।
एक स्वस्थ सुत्ने ढाँचा राख्नुहोस्। दिनभरको सानो सम्भव (वा सबै मा) को समयमा सुत्न प्रयास गर्नुहोस् विशेष गरी यदि तपाईंले रातभर बेस्सन्देह वा हल्का रातो अनुभव गर्नुहुन्छ। दोहोरो नोप राम्रो छ, तर प्रायः यसले स्वस्थ नींद-ज्वार ताल बाधा पुऱ्याउन सक्छ।
तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यलाई विचार गर्नुहोस्। सरकोडोसिस हुनु कठिन छ र मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाहरूमा उदास हुन सक्छ। सरकोडोसिसयू न्युल मद्दतलाइनलाई कल गर्नुहोस् वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञलाई कुरा गरौं भने तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने।
अन्तमा, सक्रिय रहनुहोस्! सम्भव रूपमा सक्रिय रहनुहोस्, न केवल शारीरिक रूपमा तर मानसिक र सामाजिक पनि। यदि तपाईं एक दिन, मध्यम तीव्रता,5दिन प्रति हप्तामा 30 मिनेटको लागि व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ।